ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် ၊ တောင်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ အပတ်စဉ် (၅) စစ်သင်တန… – PVTV Myanmar
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် ၊ တောင်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ အပတ်စဉ် (၅) စစ်သင်တန…
ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် ၊ တောင်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ်ရဲ့ အပတ်စဉ် (၅) စစ်သင်တန်းဆင်းပွဲကို အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးရည်မွန်က သဝဏ်လွှာ ပေးပို့ခဲ့တဲ့ သတင်း
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ လူ့အခွင့်အရေးဝန်ကြီးဌာနက အကြမ်းဖက်စစ်တပ် အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်း သတင်းမီဒီယာအပေါ်ဖိနှိပ်မှုအခြေအနေကို ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့သတင်း
မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမယ့် Myanmar Witness အဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့သတင်း
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့ အမျိုးသမီး ၊ လူငယ်နဲ့ ကလေးသူငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဝန်ကြီးဌာနတို့က ဇူလိုင်လ ၅ရက်နေ့ရက်စွဲနဲ့ ပူးတွဲကြေညာချက်တစ်ရပ်ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ သတင်း စတဲ့သတင်းတွေကို တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Like – 6.4K Share – 424
Thurain Htun says:
Daw Tin Tin Myo says:
2021-07-06 at 10:37 PM
Thank for true new.
ပျူစော ထီး says:
2021-07-06 at 10:54 PM
Wow လူမဲ့လေ လှုိင်းအစိုးရဆိုတာ သူတို့လား 😁😁😁😁
Naing MyintOo says:
2021-07-07 at 4:19 AM
2021-07-07 at 5:00 AM
2021-07-07 at 8:26 AM
Maung Toenaing says:
2021-07-07 at 9:52 AM
2021-07-07 at 11:50 AM
We believe NUG.
2021-07-07 at 12:27 PM
2021-07-07 at 3:22 PM
2021-07-07 at 5:00 PM
2021-07-07 at 6:07 PM
Ni Ni Oo says:
2021-07-07 at 9:11 PM
ထာဝရ အေမ says:
2021-07-07 at 9:29 PM
2021-07-07 at 9:44 PM
Ak Min says:
Myanmar Update News:
“ခရစ္စတင်းဘာဂနာ” ရဲ့ ပြောကြားချက်အရ
ကုလအဖွဲကြီးရဲ့ တုံပြန်မှုတိုင်းဟာ အများပြည်သူကို အကာအကွယ်ပြုပေးနိုင်ရေးနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ရှုထောင့်တွေပေါ် ဗဟိုပြုပြီး လုပ်ဆောင်တာ ဖြစ်တယ်။
NUG က ဒေါက်တာ ဇော်ဝေစိုး
တပ်မတော် (PDF) ကိုဖွဲစည်းပြီး
မီးရှိခြင်း အပြစ်မဲ့ အရပ်သားတွေကို အကြမ်းဖက် သတ်ဖြတ်တာတွေ ရှိနေခဲ့တာ
NUG က ဖွဲစည်းထားတဲ့ PDF အဖွဲအစည်းဟာ
မြင်ရတော့ အင်မတန်မှလည်း ရွံရှာမိပါတယ်။
ဒီလို အကြမ်းဖက်မှုမျိုးကို လုံးဝလက်သင့်မခံ
စစ်အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ နစက အစိုးရက
ကုလရဲ့ တောင်းဆိုမှုအရ ဖမ်းဆီးထားတဲ့
ပြည်တွင်းရေးကို တိုက်ရိုက်ဝင်ရောက် စွက်
နယ်နိမိတ်ခြင်းထိစပ်နေတဲ့ အာဆီယံ နိုင်ငံတွေရဲ့
သူရဲ့အမြင်ကိုThe New Humanitarian
2021-08-07 at 3:19 PM